Nhau - ZPMC kaviri mudziyo unosvika stacker iri pano
Munguva pfupi yapfuura, Shanghai Port Machinery Inorema Indasitiri yakavhura iyo-bhokisi-rakapararira iro rinogona kuenderana nekambani izere nhevedzano yekusvika stacker pane iyo yakajairwa imwechete-mudziyo wekusvikira stacker.
Iyo mbiri-bhokisi stacker ine yakanakisa dhizaini dhizaini uye dhizaini dhizaini. Inogona kusimudza maviri-tsoka kana makumi mana-tsoka tsoka zviyero panguva imwe chete, uye inogona kukanda kusvika kune yepfumbamwe pasi. Kunonyanyisa vachisimudza uremu - matani 10, izvo zvinopfuura zvakajairika stackers. Iko kushanda kweshanduko kwechigadzirwa kunowedzerwa neanopfuura makumi mana muzana, iyo inogona kukurumidza kusangana isina chinhu mudziyo shanduko, kurongedza, uye yakachengeteka uye yakavimbika.
Nekukura kwakadzikama kwechiteshi chemidziyo yezvigadzirwa uye nekuvandudzwa kwechitima chemidziyo, kushandiswa kwemidziyo kwanyanya uye kwakawanda, uye musika wekubata michina wakawedzera. Parizvino, kambani yakagamuchira akawanda ekunze odhita yekaviri-mudziyo kusvika masiteki, uye yapedza kutumira kweimwe michina.
Midziyo inobata ndeimwe yemakina akakosha anoshandiswa mumahombekombe ezvikepe, mumayadhi emidziyo. Iyo inogona kuvandudza mashandiro anoita anofambisa emidziyo, yakawanda yemidziyo isina chinhu inongoiswa mune imwe saiti, asi isina chinhu mudziyo inobata inogona kuiendesa nyore nyore kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe nzvimbo. Kwete chete isina chinhu inobata mudziyo, asi zvakare anosvika ma stackers ese ari maviri akakosha michina yebhegi yekufambisa basa.
Inorambidzwa kushanda kweisina chinhu mudziyo stacker
Kushanda kwemidziyo kunorambidzwa pasi pemamiriro ezvinhu anotevera:
NyNzvimbo ipi neipi yekuchengetedza yakaiswa pane iyo stacker haigone kushanda zvakajairika. Semuenzaniso: mwenje wemwenje, magirazi ekuona kumashure, chiratidzo chekuparadzira chinoshanda, kudzorera buzzer, nezvimwe.
⑨Mabhureki, magiya ekufambisa, anobata mashandiro uye zvimwe zvivakwa zvakakanganisa.
Empty mudziyo wekubata inobata mitemo
Usati watanga, tarisa uye simbisa kuti hapana munhu ari pachigadzirwa uye netambo yekumhanya. Kana muchina uine chero alarm, zvinorambidzwa kutanga injini kuti ishande. Chinokonzera alarm chinofanirwa kuwanikwa uye alarm inogona kubviswa injini isati yatanga.
Kana giya regear rikaiswa mune kwazvakarerekera, injini inogona kutangwa, zvikasadaro kutanga hakushandi.
Sure Ita shuwa kuti hapana munhu ari kufamba kana kumira pasi pechiparadzira (kunyangwe paine uremu hwekusimudza), uye hapana munhu anotenderwa kuseri kweyekuremera panguva yekushanda, zvikasadaro hazvibvumidzwe kushanda neshure.
Mutyairi anofanira kutarisa kwaanofamba uye kunyatso tarisa kunzvimbo dzinogona kuoneka vanhu kana dzimwe mota. Kana iyo ndima yekutarisa ikakanganiswa nemutoro, mutyairi anofanira kutyaira mota kumashure.
Zvinorambidzwa kutakura vanhu kunze kwekombi kana pamutoro. Chete cab
Post nguva: Jul-26-2021